Operation Manager | Golden Gate Int'l Development Co., Ltd. ﻿
Company: Golden Gate Int'l Development Co., Ltd.
Beingaenormous firm, it is running construction business throughout the country withapretty success. Manpower of 2000 daily paid worders permanent staff and 200 technicians are employed. The company has been implementing construction projects, road & bridge projects, historic projects given by the country and social affairs using effort and power of efficient staff.The company practicesamotto which says: People are working together inacommitted way to achieveacommon goal or mission. The work is interdependent and tean members share responsibility and themselves accountable for attaining the results. “Nowadays it could be seen that the economic business are booming and thriving successfully due to the utilization of the market-oriented systems in the State’s economy”.Our company will preserve and continue the achievement for centuries with the full notion for the sake of the country, the people and society based on the efficient and effective human resources.
Work location အမှတ်(၂၁၉)၊သစ္စာလမ်းမကြီး၊(၁၃)ရပ်ကွက်(သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
Company Industry: Operation Manger
Chief Engineer M/F (2)
•	လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော Short Drawing များကိုရေးဆွဲနိုင်ပြီး ညွှန်ကြားပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Civilနှင့်ပတ်သက်သော Department ကိုဦးစီးနိုင်သောအရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံရမည်။
•	လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
Store Supervisor M (2)
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအားနားလည်သူ/အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစား ပေးမည်။
Personal Secretary Officer (PSO) M (2)
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်
M&E Coordinator M (2)
•	နယ်သွားနိုင်သူအား ဦးစားပေးမည်။
Office Staff M/F (2)
•	Microsoft Office (Excel /Word/ Power Point/ Adobe Pagemaker/Photshop)နှင့် Internet ၊ Email တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုနားလည်သူ/အတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။ •	အချိန်မရွေးနယ်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကိုယ်ပိုင်စ်ိတ်ကူးဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	နယ်သွားနိုင်သူအားဦးစားပေးမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ Site Engineer (Civil/M&E)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ Senior Engineer(QS)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ Project Engineer (Civil/M&E)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ Assistant Chief Engineer (Civil/M&E)
Operation Manager Business Management Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Golden Gate Int'l Development Co., Ltd Business Management Jobs Business Management Jobs Operation Manger Jobs in Myanmar, jobs in Yangon